Trump oo ka Guuleystay Dhaqdhaqaaqa "Never Trump"
Gudiga maamula Shirweynaha Xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa u diiday xubnaha xisbiga in ay doortaan qof aanan aheyn musharaxa ugu codka badnaa doorashooyinkii is reeb reebka ee loogu soo baxayey musharaxnimada madaxeynaha Mareykanka.
Go,aankan ayaa waxa uu dhabarjab siyaasadeed ku yahay dhaq-dhaqaaq loogu magac daray Never Trump “Marnaba Trump” oo ay qaar ka mid ah xubnaha Xisbiga Jamhuuriga ugu ololeynayeen in Shirweynaha laga dhigo mid dhamaan ergada ka qeybgaleysa shirka ay dooran karaan qofka ay rabaan.
Shirweynaha Xisbiga Jamhuuriga ayaa waxaa lagu wadaa inuu todobaadka soo aadan ka dhaco magaalada Cleveland, ee gobolka Ohio. Wafuuda ka qeybgaleysa ayaa si aad ah loogu maleynayaa in ay halkaasi kaga dhawaaqaan in Donald Trump uu noqdo musharaxa Xisbiga Jamhuuriga ee doorahada madaxtinimada Mareykanka ee sanakdaan.
Madaxa olalaha doorashada Trump, Paul Manafort ayaa u sheegay wargeyska The Washington Postin isku dayga ah in la badalo sharciga uu burbur u keeni karo xisbiga.
Trump ayaa ah nin ay isku qilaafsanyihiin xubnaha xisbigiisa. Waxa uu horay u weeraray dadka laga tirada badanyahay, soo galootiga, dumarka iyo qaar badan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Madaxweynihi hore ee Mareykanka Bush iyo musharaxii hore ee xisbiga Jamhuuriga Mitt Romney ayaa labaduba sheegay in aysan ka qeybgali doonin shirweynaha xisbiga ee todobaadka danbe ka dhacayo magaalada Cleveland.
Laakin sida ay qabto Saraha Binder oo ka tirsan machadka Brookings Institution, Donald Trump ayaa la filayaa in wafuuda xisbiga Jamhuuriga ay u magacaabi doonaan musharraxooda doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkaan 2016.